UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOTYALO-MALI lwaseSwitzerland | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA iSwitzerland, Ukufudukela kwezoqoqosho ngokutyala imali yokuhlala eSwitzerland ngokutyala iSwitzerland, ukuhlala ngokutyala imali eSwitzerland, ukuhlala ngo
Indawo yokuhlala ngoTyalomali eSwitzerland kunye neVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eSwitzerland:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland
● Ubummi ngotyalomali oluvela eSwitzerland
● IVisa yegolide eSwitzerland
● Ipasipoti yesibini evela eSwitzerland
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eSwitzerland Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eSwitzerland kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eSwitzerland basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo-mali eSwitzerland zibonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala imali eSwitzerland, ukuhlala kwakhona ngokwenkqubo yotyalo-mali eSwitzerland, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eSwitzerland, ukuhlala kwakhona okwesibini ngotyalo-mali eSwitzerland, ukuhlala kabini ngobutyalo-mali eSwitzerland, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali eSwitzerland , Ukuhlala isigxina ngotyalo-mali eSwitzerland, Ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali eSwitzerland, Ukuhlala kwakhona ngezikimu zotyalo-mali eSwitzerland, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eSwitzerland, Ubummi ngotyalo-mali eSwitzerland, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eSwitzerland, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eSwitzerland, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eSwitzerland, ubumi bobabini ngotyalo-mali eSwitzerland, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala imali eSwitzerland, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali eSwitzerland, iinkqubo zobumi boqoqosho eSwitzerland, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eSwitzerland, eCitize Ubunini bezikim zotyalo-mali eSwitzerland, ipasipoti yesibini eSwitzerland, iinkqubo zokundwendwela yesibini eSwitzerland, inkqubo yesibini yokundwendwela eSwitzerland, ipasipoti yesibini yesibini eSwitzerland, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eSwitzerland, ipaspoti yesibini yozakuzo eSwitzerland, ipasipoti yesibini yotyalo-mali eSwitzerland, Ipasipoti yesibini yokuba ngummi eSwitzerland, iskim sepasipoti yesibini eSwitzerland, izikimu zepasipoti zesibini eSwitzerland, i-visa yegolide eSwitzerland, ii-visa zegolide eSwitzerland, iinkqubo zevisa zegolide eSwitzerland, inkqubo yegosa yegolide eSwitzerland, i-visa yesibini yegolide eSwitzerland, inkqubo yesibini yegolide yegosa eSwitzerland, i-visa egolide kabini eSwitzerland, ubumi kunye ne-visa yegolide eSwitzerland, indawo yokuhlala kunye ne-visa yegolide eSwitzerland, ubumi baseVisa obugolide eSwitzerland, inkqubo yevisa yegolide eSwitzerland, izikimu zevisa zegolide eSwitzerland.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali eSwitzerland ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eSwitzerland lokuhlala kwakhona ngotyalomali: I-CHF 200,000 ngonyaka
Intshayelelo eSwitzerland kunye nokuHlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda nzulu ngeSwitzerland
Ubuncinci baseSwitzerland — ummandla wayo opheleleyo umalunga nenxalenye enkulu yelo laseScotland — yaye abantu bayo abangathandekiyo abanikeli nkcukacha zingako ngokubaluleka ehlabathini lonke.
Isizwe esivaliweyo seentaba ezinqamlezayo, amachibi amakhulu eAlpine, iintlambo eziluhlaza ezinamabala amdaka kunye needolophu ezincinci, kunye noluntu oluchumileyo lwasezidolophini oludibanisa indala kunye nolutsha, iSwitzerland sisiseko seendawo ezahlukeneyo zomzimba nezentlalontle yasentshona Yurophu. ezi zinto zimbini zibalasele ngokubalasa kunye nendlela yokuphila. Iinxalenye zazo zombini ziye zaba zizinto ezinkulu kwisizwe, esinegama elibiza imifanekiso ye-ice sheet esike iiAlps ezithandwa kakhulu ngabaphengululi, iingcali, amagcisa okufota, kunye nabazinikeleyo kwimidlalo evulekileyo evela kwihlabathi liphela.
ISwitzerland imi kwiNtshona yeYurophu, inikezela ngeyona mozulu ilungileyo yemisebenzi ebaliweyo kunye nezinye iindlela zokwenza umthambo. Ngenxa yengingqi egxile kuyo, iSwitzerland ifumana inzuzo ngokusondela kumazwe azinzileyo ngokwemali, umzekelo, iJamani, i-Itali neFrance. Kule migca, iSwitzerland sisiqalo esingaqhelekanga semibutho efuna ukungena kwimakethi yaseYurophu. ISwitzerland isengqiqweni njengorhwebo lovavanyo lwezinto ezintsha okanye ulawulo ngaphambi kokuzinza kukhetho lokoyisa intsalela yeYurophu.
ISwitzerland ifumene ukungaziwa ngenxa yodidi oluphezulu kunye nonyango olusebenzayo. Ukuthelekisa ne-US kuyingqinelwano, nangona kunjalo, abahlali bamazwe apho iinkonzo zonyango zisimahla okanye zixhaswa ngemali kakhulu baya kuyifumana inyanga nenyanga indleko yokufumana ukhathalelo lwempilo olufunekayo. Iqela labane ngokungathandabuzekiyo lichithe ngaphezulu kwe- $ 800 inyanga nenyanga kukhuseleko olusemgangathweni ngokwenyani, ukuthathelwa ingqalelo kwamazinyo akubandakanywanga. Bonke abahlali kufuneka babandakanywe kwiklinikhi, kwaye unikwa iinyanga ezintathu zokuqala ukuhlala kwakho ukulungisa oku. Umgangatho wokufundisa eSwitzerland uphezulu, nangona kunjalo, kunzima, ukwenza isishwankathelo kuba iinkantoni ziphendula ngesikolo.
I-Kindergartens ikhona kuyo yonke into ngaphandle kwemimandla emininzi yelizwe kwaye simahla (sisebenza yikomiti yengingqi). Ngayiphi na imeko, akukho ndawo iqhutywa ngurhulumente okanye ukufundiswa kwabantwana abaselula; Ukungabikho konakekelo olulinganiselweyo lwabantwana babafundi abangaphambi kobuncinci sisichaso esiqhelekileyo. Ucacisa rhoqo ukubeka izimvo malunga "nokusasaza" kwabantwana: ulutsha lwahlulwe luxhomekeke kumandla abo abonakalayo. Ngelixa ukusasaza kuyinto endala efanayo-kwii-canton ezithile oku kunokwenzeka njengolutsha njenge-10 okanye i-11- ihlala iyeyona nto ibalulekileyo kwabo babekade bengabagcini. Ingcinga yokuba umncinci unokukroba ngekamva lakhe, efumanisa indlela yakhe ngakumbi ezantsi kwendlela, ayisiyongcamango efumanisa ubabalo apha.
Isikolo sekholeji sincinci. Ngaphezulu kwe-70% yabantwana baseSwitzerland abalungiselelwe kwizikolo zobungcali okanye into eyenye. ISwitzerland ibonelela ngesigqibo esifanelekileyo sezikolo ezingezizo ezaseburhulumenteni, igalelo elininzi kwihlabathi liphela, iBritane, okanye uqeqesho olusekwe eMelika. Kuyabiza, kodwa, nangona kunjalo, uninzi lwee-exps zethamsanqa zinale nto njengenxalenye yempahla yazo yokufuduka. Ngokubanzi, iindawo zaseSwitzerland ezigcinwe ngamaBritane. Ngokuqinisekileyo ngekhe basondele kuwe okanye bakwamkele ngaphandle kokuba ubamkele. Oogxa bakho baya kusabela kakuhle kwimeko apho ubamkela khona nge-espresso, ipitsa, okanye isidlo sangokuhlwa esirhabaxa ngethuba lokuba ufuna ukubazi ngcono. Nawe ungathatha iiklasi zangokuhlwa okanye ujoyine iklabhu yemidlalo, kwaye, ngaphezulu kwako konke, ufumane ubuchule bolwimi. Ngexesha apho ubona inani lamathuba okuhlala ligcwalisiwe ngo "ngubani owaziyo umbutho," uyakuqonda ukubaluleka komntu nomntu wonxibelelwano kuluntu lwaseSwitzerland. Zama ukungacingi kancinci ngayo. Yiya kubuxhakaxhaka bobumelwane kunye nezo ndibano zithandekayo esikolweni sabantwana, nokuba awukuqondi oko kuthethwayo. Ukungahambi kwakho ngokungathandabuzekiyo kuya kuqatshelwa. Eyona ngcebiso iphambili malunga nokuxubana kukhawulezisa. Uya kuba wesiqhelo kungadlulanga nemizuzu emihlanu emva kwexesha elicwangcisiweyo. Ileta yaseSwitzerland ibisoloko yahlukaniswa nokungaziwa kunye nethamsanqa. Njengomhlali eSwitzerland, nawe unokuba nencwadi yemfundo yaseSwitzerland. Ukuhlawuliswa kweebhanki kwileja kunye nekhredithi okanye ikhadi lokutshekisha. Nokuba ziphi na ezinye iindlela zeplastiki abazifumanayo — izinto ezintsha ze-Intanethi, ukuhlawulisa ngokuthe ngqo, kunye nokugcina iifowuni ngocingo — uninzi lwabantu baseSwitzerland lubonakala ngathi luthande imali. Ukuya kugqitywa inyanga nenyanga iindawo zokugcina iiposi ziya kugcwele ngabantu abagubungela iithebhu ezinkozo. Kukho isakhelo esimnandi soololiwe kulo lonke uhlanga kunye nezithuthi zikawonkewonke eziqinileyo ngaphakathi koluntu lwasezidolophini. Ngaphandle kwento yokuba oololiwe bathetha ngokubaluleka, ngakumbi ngekhadi elibhalwe ezantsi, ukuhanjiswa kunye neemoto zekhebula kubiza kakhulu amatikiti angabodwa. Kwiinkantoni ezininzi abantwana abangaphantsi kwe-12 bahamba simahla. Ngokwembali, iSwitzerland yaziwa ngokungakhethi cala nangokuthula. Nangona kunjalo, kukho iqela elincinci lokuziphatha kunye noluntu ekuhlaleni ukuze wazi malunga nokuhlala kwakho kwisizwe ngokufanayo sizolile. Unokucinga ukuba amaSwitzerland ayaziwa ngokuthembeka ngenxa yeewotshi zabo, kanti umnqweno wokufika ngexesha uqhuba ngaphezulu kunoko. Kwilizwe lezeshishini, iindibano ziqala ngokuthe ngqo kwishedyuli kwaye kujongwa njengongathandekiyo ukufika emva kwexesha. Ewe, nakukuzibophelela ekuhlaleni, ukufika emva kwexesha kujongwa njengokungenabuntu.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalomali eSwitzerland
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland
I-CHF 200,000 ngonyaka
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland
D visa okanye imvume yokuHlala okanye iSwitzerland C visa
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eSwitzerland
Emva kweminyaka emi-10 yokuphila
Emva kweminyaka eli-12 yokuphila okungaphazanyiswa ngokwenziwa kwendalo
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseSwitzerland
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngokutyala imali eSwitzerland
> Inkqubo yokuhlala eSwitzerland
> Inkqubo yoTyalomali lweShishini laseSwitzerland
Kutheni usiya kubuhlali ngokutyala imali eSwitzerland
ISwitzerland lilizwe laseYurophu elidume ngenkqubo yemali ekumgangatho wehlabathi, imigangatho yokuphila ephezulu kakhulu, imfundo egqibeleleyo kunye nokhathalelo lwempilo, kunye nozinzo olukhulu kwezopolitiko. ISwitzerland lilungu lommandla waseSchengen, eqinisekisa ukuhamba kwabahlali ngaphandle kwevisa kunye neentsapho zabo. Inkqubo yokuhlala yegolide yelizwe ijolise kubantu abafundileyo nabaphumeleleyo. Inika indawo yokuhlala eSwitzerland yomenzi-sicelo kunye nosapho kwiinyanga ezi-2-4 kuphela.
Ukufudukela kosapho eSwitzerland
Isicelo segolide sevisa esiseSwitzerland sinokubandakanya amalungu osapho asondeleyo omenzi-sicelo: iqabane kunye nabantwana abancinci abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala.
Indawo yokuhlala ngenkqubo yotyalo mali eSwitzerland
Ukuba unenjongo yokwenza isicelo sokuhlala eSwitzerland kuya kufuneka ube ungaphantsi kweminyaka eyi-55 kwaye awunayo irekhodi lolwaphulo-mthetho. Inkqubo yesicelo ibandakanya udliwanondlebe olungqongqo kwaye ilawulwa ngakumbi kunezinye iinkqubo zevisa yegolide. Inkqubo iyakhawuleza kwaye ihlala kuphela kwiinyanga ezimbini ukuya kwezine phakathi kokungeniswa kunye nokufumana indawo yokuhlala.
Inkqubo yaseSwitzerland: Ngaphantsi kwale nkqubo umntu kufuneka ahlawule i-CHF 200,000 njengesixa semali yerhafu kwisanti yaseSwitzerland apho uhlala khona. Kuxhomekeka kwikanti le mali inokuhamba isuke kwi-CHF 400,000 iye kwi-CHF 600,000 ngonyaka. Awunakho ukusebenza phantsi kwale nkqubo
Inkqubo yoTyalomali lweShishini laseSwitzerland: Abangengabo abemi base-EU kufuneka benze inkampani entsha yase-swiss okanye batyale imali kwinkampani yase-swiss esele ikhona, ngaphandle kokuba ingeniso ingekho ngaphantsi kwesigidi se-CHF
Imfuno yemali eSwitzerland
Kuya kufuneka ubuncinci bexabiso le-CHF 1 yezigidi ukuze utyale imali kwishishini esele livunyiwe. Kuya kufuneka ubonakalise ukuba utyalo-mali lwakho luluncedo kuluntu ngokugcina imisebenzi esele ikho okanye ukudala eminye emitsha, ukulinganisa ubuchwepheshe obutsha okanye uphuhliso lommandla. Kuya kufuneka wenze utyalomali kwingingqi oza kuhlala kuyo, kwaye utyalo mali kufuneka ligcinwe ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eSwitzerland
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo-mali baseSwitzerland kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eSwitzerland ibonelela abaxhasi kunye neentsapho zabo eSwitzerland ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eSwitzerland, ukuhlala ngokutyala imali eSwitzerland kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali eSwitzerland okanye iVisa yaseGolide esuka eSwitzerland okanye ubummi ngotyalo-mali oluvela eSwitzerland okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda kumathuba otyalo mali lokuthengisa izindlu nomhlaba eSwitzerland, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani ISwitzerland okanye i-offshore, izibonelelo zabantu eSwitzerland kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi ngaphakathi naseSwitzerland nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseSwitzerland:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eSwitzerland, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eSwitzerland, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eSwitzerland, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali eSwitzerland, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eSwitzerland kunye nefemu yokubonelela ngokufuduka eSwitzerland
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eSwitzerland ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eSwitzerland ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eSwitzerland ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eSwitzerland ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela eShishini ngokusuka eSwitzerland ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eSwitzerland.
Iinkqubo zevisa zegolide eSwitzerland ziye kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eSwitzerland ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eSwitzerland ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eSwitzerland ziye kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali lwaseSwitzerland ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eSwitzerland ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali eSwitzerland, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala eSwitzerland. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eSwitzerland abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eSwitzerland, belanda eyona mbuyekezo.
Ezona nkqubo zintle zokuhlala kwezindlu eSwitzerland notyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eSwitzerland.
Kufuneka uyazi -Ukuhlala kwakhona eSwitzerland ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona nguGqwetha loTyalo-mali eSwitzerland kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu oluncedo malunga nokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutyala imali eSwitzerland. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuHlala ngokuTyala eSwitzerland zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufudukela eSwitzerland okanye eSwitzerland, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala imali eSwitzerland kubaxhasi ngokufumana imvume yokuhlala eSwitzerland nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo eSwitzerland, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali eSwitzerland siya kufuna iikopi ezivavanyiweyo zepasipoti yomthengi kunye namalungu osapho.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali eSwitzerland. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBuhlali ngokuTyala imali eSwitzerland kunye neeVisa zegolide ziya kunceda ngokugcwalisa iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwakho afumane isicelo sokutyala imali eSwitzerland, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni abafanelekileyo baseSwitzerland.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala imali eSwitzerland samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngobumi ngeenkonzo zotyalo mali eSwitzerland kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini aseSwitzerland:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eSwitzerland azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka eSwitzerland.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalomali eSwitzerland azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eSwitzerland okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eSwitzerland.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eSwitzerland awanikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eSwitzerland.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eSwitzerland ayenzelwa abantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eSwitzerland.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eSwitzerland ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eSwitzerland.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeSwitzerland ayifumaneki kubantu baseSwitzerland abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eSwitzerland, okanye ukuthuthwa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eSwitzerland ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eSwitzerland ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eSwitzerland.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Swizalend ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eSwitzerland.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha eSwitzerland abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eSwitzerland.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseSwitzerland nakwi-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eSwitzerland malunga nokuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eSwitzerland.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngenkxaso yotyalo mali eSwitzerland yotyalo-mali, yokufudukela kwelinye ilizwe kunye nocwangciso lwezindlu kunye nomhlaba eSwitzerland.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseSwitzerland, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eSwitzerland zibonelela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga elifanelekileyo lempumelelo eSwitzerland.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eSwitzerland sixhasa abathengi kunye neentsapho zabo eSwitzerland.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eSwitzerland kunye neearhente zomthetho eSwitzerland ezibonelela ngenkxaso kubathengi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zenkqubo yokusingathwa kweSwitzerland kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eSwitzerland nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eSwitzerland
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iSwitzerland, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko, ukuhlala kwakho ngokutyala imali eSwitzerland kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala ngokuTyala eSwitzerland
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseSwitzerland, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuHlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eSwitzerland kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eSwitzerland
Inkqubo yeMvume yokuSebenza eSwitzerland
Ukuhlala okwethutyana eSwitzerland
Izindlu zoonozakuzo kunye neeNdlu zoonozakuzo baseSwitzerland
Indawo yokuhlala ngoTyalo mali eSwitzerland kunye nezinye iinkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelela eSwitzerland malunga neemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela nosapho lwakho usiya eSwitzerland ngokutyala, thina njengeqabane lakho eSwitzerland, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eSwitzerland ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala kwakhona ngokubonisana notyalo mali eSwitzerland, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zabasebenzi eSwitzerland, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseSwitzerland abasenza ivenkile yokumisa enye eSwitzerland kunye namazwe ayi-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini laseSwitzerland ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuhlala ngokutyala imali eSwitzerland ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eSwitzerland nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eSwitzerland okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eSwitzerland zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki eSwitzerland
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eSwitzerland uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eSwitzerland kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eSwitzerland, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eSwitzerland
Ngaba ufuna ukubonisana eSwitzerland, kuba Izisombululo zentlawulo yedijithali eSwitzerland Njengesango lokuhlawula ngokwesiko okanye ngefintech eSwitzerland okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali Switzerland ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eSwitzerland ukuqala kwangoko eSwitzerland.
Iinkonzo zabasebenzi eSwitzerland
yethu Inkampani yabasebenzi eSwitzerland inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba zengqesho eSwitzerland free.
Iinombolo zeFowuni eyiNene eSwitzerland
Iinkqubo zefowuni zeshishini eSwitzerland kunye amanani abonakalayo eSwitzerland Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eSwitzerland
Accounting, ngenxa yenkuthalo efanelekileyo eSwitzerland kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eSwitzerland
Ukuseta ishishini eSwitzerland
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland, ukuseta ishishini kwi Swizalend.
Sinikezela ngezisombululo ze-IT ezichazwe ngezantsi eSwitzerland
Uyilo lwewebhu eSwitzerland
Uphuhliso lwezorhwebo eSwitzerland
Uphuhliso lwewebhu eSwitzerland
Uphuhliso lweBlockchain eSwitzerland
Uphuhliso losetyenziso eSwitzerland
Uphuhliso lweSoftware eSwitzerland
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali eSwitzerland
Sibonelela ngokuHlala ngokusemthethweni ngokwesisombululo soTyalo-mali eSwitzerland kunye nempumelelo kubaxumi bethu kubaluleke kakhulu, kuba iSwitzerland, siziinkokheli, inkampani yethu yezomthetho eSwitzerland ineearhente zokufudukela eSwitzerland, sinodumo lokuhambisa awona mava asemagqabini okwenza iinkonzo eSwitzerland kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseSwitzerland kunye neentsapho zabo. Indawo esihlala kuyo liqela lotyalo-mali eSwitzerland libonelela ngezisombululo eziyimpumelelo zabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eSwitzerland, xa imvume yakho yokuhlala eSwitzerland ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseSwitzerland ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo mali eSwitzerland. Ukuba useSwitzerland okanye uceba ukutyelela iSwitzerland, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eSwitzerland ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseSwitzerland. Kuxhomekeka kwilizwe lokuhlala kwakho, kufanele ukuba kukhutshwe umthetho okanye kubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseSwitzerland.
Imibuzo ebuzwa qho-Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eSwitzerland
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eSwitzerland?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala eSwitzerland ngokutyala imali kuqoqosho lwaseSwitzerland ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eSwitzerland, ukuhlala kwenkqubo yotyalo mali eSwitzerland. ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo mali eSwitzerland, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eSwitzerland, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali eSwitzerland kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali eSwitzerland, abasebenza ngokuhlala kakuhle ngabameli botyalo mali eSwitzerland, kunye neefem eSwitzerland.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eSwitzerland | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali eSwitzerland | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eSwitzerland | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eSwitzerland | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eSwitzerland
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali eSwitzerland?
Ubummi ngotyalo-mali eSwitzerland, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseSwitzerland ngokutyala imali kuqoqosho lwaseSwitzerland ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eSwitzerland, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali eSwitzerland exhaswa ngabemi beenkonzo zotyalo-mali eSwitzerland, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eSwitzerland, abemi abangcono ngamagqwetha otyalo-mali eSwitzerland kunye nobumi obungcono ngabacebisi botyalo-mali baseSwitzerland, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eSwitzerland, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eSwitzerland.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eSwitzerland | Abaceli abafudukela kwamanye amazwe eSwitzerland | Utyalomali olufikelelekayo lwamagqwetha eSwitzerland | Utyalomali olufikelelekayo lwamagqwetha eSwitzerland | Abatyali mali abafikelelekayo eSwitzerland | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo eSwitzerland
Ithini inkcazo yepaspoti yesibini eSwitzerland?
Ipasipoti yesibini eSwitzerland, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseSwitzerland ngokutyala imali kuqoqosho lwaseSwitzerland ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, ukuthengiswa kwezindlu, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Iinkonzo zokundwendwela zesibini eSwitzerland, ngamagqwetha esibini eepasipoti eSwitzerland, awona magqwetha epasipoti aphezulu eSwitzerland kunye nabacebisi beepaspoti besibini abaseSwitzerland, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela yesibini eSwitzerland, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eSwitzerland.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini eSwitzerland | Iiarhente zokundwendwela zesibini eSwitzerland | Amagqwetha esibini epasipoti eSwitzerland | Igqwetha lesibini lokundwendwela eSwitzerland | Abacebisi bokundwendwela besibini eSwitzerland
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eSwitzerland?
IVisa yegolide eSwitzerland, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eSwitzerland ngokutyala imali kuqoqosho lwaseSwitzerland ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide eSwitzerland, inkqubo yegosa yegolide yaseSwitzerland exhaswa yi Iinkonzo zevisa zegolide eSwitzerland, ngamagqwetha ethu abalaseleyo egosa laseSwitzerland, amagqwetha egosa aphezulu egosa eSwitzerland kunye nabacebisi abagqwesileyo begosa baseSwitzerland, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eSwitzerland, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eSwitzerland.
Iinkonzo zevisa ezimnandi eSwitzerland | Iiarhente zevisa ezimnandi eSwitzerland | Amagqwetha egosa egolide eSwitzerland | Amagqwetha egosa egolide eSwitzerland | Abacebisi ngevisa zegolide eSwitzerland
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eSwitzerland?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eSwitzerland yi-CHF 200,000 ngonyaka.
Ngaba uyabonelela ngenkxaso yezomthetho eSwitzerland yokuHlala kwakhona ngokutyala?
Ewe, igqwetha lethu eSwitzerland kunye neearhente eSwitzerland zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland kuyabiza?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali eSwitzerland kunye nokuhlala kwakhona ngokweemfuno zengxowa mali yotyalo-mali eSwitzerland yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngokuHlala ngoTyalo-mali eSwitzerland, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo-mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eSwitzerland okanye i-visa yotyalomali eSwitzerland?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eSwitzerland ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eSwitzerland ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali eSwitzerland usuka e-Bangladesh, Uhlala ngokutyala imali eSwitzerland usuka e-Indonesia, Uhlala kwakhona ngotyalomali eSwitzerland usuka eSri Lanka, Uhlala kwakhona ngokutyala imali usiya eSwitzerland usuka eNepal, Uhlala kwakhona ngokutyala imali eSwitzerland usuka eIndiya naseUhlala kwakhona ngotyalomali eSwitzerland ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eSwitzerland
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngoTyalo mali eSwitzerland
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eSwitzerland
Iirejista zoRhwebo zaseSwitzerland
IOfisi ye-Federal yeeNkcukacha-manani
I-Swiss Federal Railways
I-Swiss Federal Statistical Office
Amagunya oRhulumente waseSwitzerland
I-Swiss Federation yezikolo zabucala
Incwadi yesifundo esisesikweni ye-Ofisi yaseburhulumenteni yaseSwitzerland
Oonobhala bembuso beMfuduko
Igunya loLawulo lweMarike yaseSwitzerland
Ukufuduswa kweZurich AG
I-Swiss portal ye-Confederation, iikati kunye noomasipala
Amaqabane e-inshurensi yaseSwitzerland
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eSwitzerland , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eSwitzerland